Imaaraatka Carabta oo joojisay Taageeradii ay siin jirtay Ciidanka Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Imaaraatka Carabta oo joojisay Taageeradii ay siin jirtay Ciidanka Soomaaliya
ABU DHABI – Wakaaladda wararka ee dalka Isutaga Imaaraatka carabta (WAM) ayaa warsaxaafadeed kusoo baxay lagu sheegay iney dowladda Imaaraatku joojisay gebi ahaanba Tababarkii ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya kaasoo soo bilowday 2014,taasoo ujeedadiisuna ahayd sidii loo tayayn lahaa ciidamada Soomaaliyeed.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in go’aankan uu yimid kaddib markii ciidamada amniga Soomaaliya qabsadeen diyaarad shacab oo ay saarneyd lacag loogu talagalay in lagu bixiyo mushaaraaadka ciidamada.
…” Imaaraatka iyo Soomaaliya ayaa leh xiriir taariikhi ah oo ku dhisan is-ixtiraam iyadoo ciidamada UAE ay tababaro u fidinayeen kumanaan Soomaali ah si kor loogu qaado tayadooda,intaas waxaa dheer dowladda Imaaraatkanwaxa ay bixineysay mushaharka 2407 askeri,waxayna u dhiseen saddex xarumood oo lagu tababaro,waxayna Soomaaliya u dirtay kooxo dhakhaatiir ah oo daaweeya dadka xanuunsan..” ayaa lagu sheegay Warsaxaafadeedka.
Dhanka kale Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda Imaaraatka ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso ciidamada Badda Puntland si kor loogu qaado awooda ciidamadaas u leeyihiin la dagaalanka kooxaha xag-jirka ah taasoo ay kala shaqeynayso beesha caalamka kuwooda taageera Soomaaliya iyo xoogaga midowga afrika ee ku sugan dalka.
Ugu dambeyn,Warsaxaafadeedka ayaa lagu soo gabagabeeyey in Imaaraatku cambaareynayo falkii xadgudubka ku ahaa xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeyey labada dal iyo kan caalamiga ah ee ciidamada Soomaaliya kula kaceen diblomaasiyiinta iyo saraakiisha dalka Isutaga Imaaraatka carabta.